Aung's Likes - Myanmar Network
Back to Aung's Page
အတိုချုံ့ပြောကြတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်စာကိုအတိုင်းအတာတစ်ရပ်အထိ ကျိုးစားလေ့လာထားပေမယ့် ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားတွေ ကြည့်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပြင်မှာ အမေရိကန်လူမျိုး၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့နဲ့ ကြုံကြိုက်လို့ စကားစမည်ပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ေ… Discussion အတိုချုံ့ပြောကြတဲ့အခါ 38 Likes ဝေါဟာရမှတ်စု (၂) postulant -acandidate, esp for admission intoareligious order သာမဏေလောင်း၊ ရှင်လောင်း tongue in cheek - ပြောင်စေပျက်စေပြောစကား. It is justatongue in cheek remark. ဒါသက်သက်အပြောင်အပျက်ပြောလိုက်… Discussion ဝေါဟာရမှတ်စု (၂) 41 Likes
Full stop အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ကွင်းခတ်ခြင်း ဝါကျအဆုံးမှာ ကွင်းခတ်ထားတဲ့ စကားစု ရှိမယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံး full stop, question mark ဒါမှမဟုတ် exclamation point ကို ကွင်းထဲမှာ ထားမလား၊ ကွင်း အပြင်မှာ ထားမလားဆိုတာ ကွင်းခတ်ထားတဲ့ စကားစုကို ကြည့်ပြီး… Discussion Full stop အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ကွင်းခတ်ခြင်း 80 Likes သင်သိဖို့လိုအပ်မည့် အင်္ဂလိပ် စကားပြော ဥပဒေ ၅ခ… ၁။ အင်္ဂလိပ် grammar ကို အများကြီး မလေ့လာပါနှင့်။ ဒီအချက်ဟာ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတွေအတွက် ထူးဆန်းနေပါတယ်။ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ် စကားပြောရာမှာ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ပါပဲ။ သင်စာမေးပွဲ အောင်ဖို့ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ် g… Discussion သင်သိဖို့လိုအပ်မည့် အင်္ဂလိပ် စကားပြော ဥပဒေ ၅ခ… 101 Likes
အင်္ဂလိပ်စာကို ဘာကြောင့်လေ့လာသင့်သလဲ ကမ္ဘာမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာ စကား (mother tongue) အနေနဲ့ အသုံးပြုနေသူ ပေါင်း သန်း ၄၀၀ ရှိတယ်။ ဒုတိယဘာသာစကား (second language) အနေနဲ့ အသုံးပြုတွေကလည်း အဲဒီနှုန်းလောက်ကို လိုက်နေတယ်။ နိုင်ငံခြား… Discussion အင်္ဂလိပ်စာကို ဘာကြောင့်လေ့လာသင့်သလဲ 71 Likes လစာမြင့်မား အလုပ်ရှာချင်သလား အလုပ်လျှောက်အင်တာဗျူးတွေမှာ ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့များ ပြောမိသလား မသိဘူး။ ဒီစကားကို မပြောမိအောင် သတိထားပါ။ ကိစ္စရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ ငွေအကြောင်းကို စကားပြောတတ်အောင် ပြောဖို့လိုတယ်။ … Discussion လစာမြင့်မား အလုပ်ရှာချင်သလား 54 Likes ဝေါဟာရကြွယ်ဝအောင် တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်မိခင်ဗမာစကားကိုပြောနေရင်းနဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့စကားလုံး ရှာမရတာမျိုးကြုံဖူးကြပါသလား။ “ဟိုလေ. . . အဲဒါ ဘယ်လိုခေါ်ပါလိမ့်... ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဟိုဒင်းလေ” စတဲ့ ဟိုဒင်း...တို့ ...ဟိုဟာ.… Discussion ဝေါဟာရကြွယ်ဝအောင် 162 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (That… That's all I need! (ဒီထက်ပိုပြီး မခံနိုင်တော့ဘူး။) ပြဿနာတွေ များနေတဲ့ကြားမှာ အခက်အခဲ ဒါမှမဟုတ် မကောင်းတာတစ်ခု ထပ်ဖြစ်တဲ့အခါ that's all I need! လို့ ပြောနိုင်တယ်။ That's all I need! I've spent… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (That… 103 Likes Steven Jobs က ဘယ်သူလဲ...( Steve Jobs - The m… Steven Jobs က ဘယ်သူလဲ... ယနေ့ခေတ်မှာ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ အောင်မြင် ရေပန်းစားနေတဲ့ Apple Inc. ရဲ့ Chief Executive Officer ပဲပေါ့။ သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားမှုဟာ ဆန်းသစ် တီထွင်တတ်ခြင်းနဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ… Discussion Steven Jobs က ဘယ်သူလဲ...( Steve Jobs - The m… 29 Likes မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိစွာဖြင့် ဆက်သွယ်ြေ… [Zawgyi]စကားအပြန်အလှန် ပြောကြတဲ့အခါ ပထမ ၂မိနစ်ကနေ ၄မိနစ်အတွင်း ဘယ်လိုလူမျိုးဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက် ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ (မျက်နှာချင်းဆိုင် ပြောဆိုရာမှာသာမက ဖုန်းနဲ့ပြောတဲ့အခါ၊ စာရေးဆက်သွယ်တဲ့အခါ မှာတောင် အဲဒီအတ… Discussion မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိစွာဖြင့် ဆက်သွယ်ြေ… 70 Likes Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ (အပိုင်း-၁) ဒီနေရာမှာ အထွေထွေ network ဗဟုသုတလေးတွေ ၊ အခြေခံလေးတွေကိုဝေမျှချင်လို့ပါ။ beginner နားလည်လွယ်လောက်တဲ့ အသေးစိတ်ရေးသားချက်လေးတွေနဲ့ရေးသားသွားပါ့မယ် ။ အဲလိုပြောလိုက်လို့ အထင်တော့မကြီးနဲ့ နော် ။ ကျွန်တေ… Discussion Network အကြောင်းသိကောင်းစရာများ (အပိုင်း-၁) 46 Likesေ​အာ​င်ြ​မ​င်ြ​ခ​င်း "တ​က​ယ့်ေ​အာ​င်ြ​မင်သူေ​တွ​ဟာ အလုပ်မြ​ဖစ်တဲ့ အေ​တွးေ​တွ​နဲ့​ အချိန်မြ​ဖု​န်း​ဘူး။ ခက်ခက်ခဲ​ခဲ မဖြစ်နိုင်တာေ​တွ​လ​ည်း​မေ​တွး​ဘူး။ အန္တ​ရာ​ယ်ဖြစ်​လော​က်ေ​အာင်လ​ည်း မ​စွ​န့်​​စား​ဘူး။ သူ​… Discussionေ​အာ​င်ြ​မ​င်ြ​ခ​င်း 77 Likes House vs Home House နဲ့ Home ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ရှင်းရှင်းလေးကိုရှုပ်အောင်လုပ်သလိုများ ဖြစ်နေမလား။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ house လည်းအိမ်၊ home လည်းအိမ် နှစ်ခု တူသလိုလိုနဲ့။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်အသုံးမှာတော့ ရှင်းပါတယ်။ house ဆိုတာ… Discussion House vs Home 100 Likes နားလည်အောင် နားထောင်မယ်၊ နားလည်အောင် ပြောမယ် [Zawgyi] မိမိ သြစတေးလျ ရောက်ခါစမှာ တစ်ခါတရံ ရပ်ကွက်ထဲက သြစတေးလျ လူမျိုးများ စကားပြောကြတာကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောနေတာမှ ဟုတ်ရဲ့လား လို့ တွေးမိတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ စကားပြောတဲ… Discussion နားလည်အောင် နားထောင်မယ်၊ နားလည်အောင် ပြောမယ် 111 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Funn… Funny you should say that (တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ) တစ်ယောက်ယောက်က ပြောလက်စ စကားအကြောင်း မသိဘဲ ၀င်ပြောတာ အံ့သြစရာ၊ မမျှော်လင့်ဘဲ အကြောင်းအရာချင်း ဆက်စပ်နေရင် Funny you should say that လို့ ပြောနိုင်တယ်။… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Funn… 208 Likes
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Heav… Heaven knows (ဘုရားမှ သိမယ်။) မသိဘူးလို့ အလေးအနက် ပြောချင်ရင် heaven knows ကို သုံးနိုင်တယ်။ 'Why has Anne changed her mind about marrying Jack?''Heaven knows! She hasn't even given Jackareason… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Heav… 155 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Not… Not anywhere near (အများကြီး လိုသေးတယ်) အများကြီးနည်းသေးတယ်၊ လိုသေးတယ်လို့ အလေးအနက် ပြောချင်ရင် not anywhere near ကို သုံးနိုင်တယ်။ I've not done anywhere near enough work to pass the exam.စာမေးပ… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Not… 149 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (How’… How’s it going (အဆင်ပြေရဲ့လားကွ။?) သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ပြောတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ နေကောင်းရဲ့လား အနေအထိုင် အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေလားလို့ မေးချင်ရင် how's it going ကို သုံးနိုင်တယ်။ Hi, Jack. How's it… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (How’… 175 Likes
သင်ယူမှုအတတ်ပညာ (မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းစေရန်နည်းလမ… စာသင်သားဘ၀မှာ အချိန်ရဲ့အများစုကို စာကျက်မှတ်ခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးကြရပါသည်။ စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ စာကျက်မှ စာမေးပွဲအောင်မည့်အတွက် မဖြစ်မနေကျုံးရုန်းကြရပါသည်။ တစ်ခါတစ်လေ စာမေးပွဲကျသည့်အခါ၊ ဒါမှမဟု… Discussion သင်ယူမှုအတတ်ပညာ (မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းစေရန်နည်းလမ… 150 Likes ဘာသာစကားသည် ဟင်းချက်ခြင်းနှင့် တူညီပုံ (Why… [Zawgyi]Lexis စကားလုံး ဆိုတာ “vocabulary” ဝေါဟာရကိုဘဲ နောက်တစ်မျိုး ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းထဲမှာသိထားပြီးတော့ လိုသလိုထုတ်သုံးတဲ့ စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုပြီးတော့ မိမိကိုယ်ကို… Discussion ဘာသာစကားသည် ဟင်းချက်ခြင်းနှင့် တူညီပုံ (Why… 99 Likes အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Let’… Let’s see (စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်) စဉ်းစားနေတယ်၊ မေ့နေလို့ ပြန်အစဖော်နေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ let's see ကို သုံးနိုင်တယ်။ You say that you are looking for accommodation for the night. Let's see.… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Let’… 208 Likes